Shirar Hiigsiga Wadatashiga 2016-ka oo looga doodayo Gobolka Bari iyo Karkaar maalmaha soo socda habka la qaadan karo ee doorasho 2016-ka | WARARKA PUNTLAND
Home Wararkii Hore akhriso Shirar Hiigsiga Wadatashiga 2016-ka oo looga doodayo Gobolka Bari iyo...
Shirar Hiigsiga Wadatashiga 2016-ka oo looga doodayo Gobolka Bari iyo Karkaar maalmaha soo socda habka la qaadan karo ee doorasho 2016-ka
Waxaa maalmaha soo socda ee Isniinta iyo Talaadada looga doodayaa Magaalooyinka Qardho iyo Bosaaso habkii loo wajihi lahaa iyo qaabkii doorasho ee la qaadan karo 2016-ka marka la gaaro dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Magaalada Qardho waxaa ka socda olole ilaa boqol Ergo Magacyadooda oo labadaas casho uga qeyb qaadanaya habka doorasho ee la q aadan karo oo lagu soo bandhigi doono sadex qaab doorasho.
Sidoo kale waxaa Magaalada Bosaaso ka socda kooxo siyaasiyiin, waxgarad cuqaal iyo bulshada shacabka ah qeybaheeda kala duwan oo wada olole loogu gogol xaarayo habka loo wajahayo hanaanka hiigsiga cusub ee 2016-ka la qaadan karo. Kooxaha ololaha hiigsiga cusub DFS wada ayaa si toos ah uga doodaya habahka sadexda nooc ee la qaadan karo doorashada Dowladda Fedraalka Soomaaliya marka la gaaro.
Madaxweynaha iyo Xukuumadda Dowladda Puntland ayaa shirar wadatashi iyo heshiisyo horay ula gaadhay Dowladda Federaalka Soomaaliya kadib markii Maagalada Muqdisho dib xiriirkoodii wada shaqeyn si hoose u furmay Puntland iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Hababka Ergooyinka loo qeybsaday oo ah nidaam siman ayaa ah mid si weyn dad badan oo aayaha siyaasadeed ee Puntland u arkaan mid mugdi xun gelin kara, waxayna si siman Ergooyinka isku qeyb yihiin oo si is le’eg loo wada siiyey saami isku mid ah Galmudug iyo Puntland.
Kooxaha Siyaasadda Puntland difaaca ee waqtiga dheer hagayey Masaraxa Siyaasada hadda dibada ka fadhiyaa tilmaamayaan in qorsha howleedka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho ka hagayaan koox yar oo isku dan ah, taasoo ah mid lagu wiiqayo hanaanka Federaalka iyo habka uu dhigayo Dastuurka Federaalka Soomaaliya oo la baalmaray.
Previous articleqaraxyo waaweyn oo ka dhacay Dalka France 140 qof ayaa ku dhimaatay +sawiro
Next articleBaarlamaanka Puntland Xildhibaano ka tirsan oo wada Mooshin ka dhan ah Xukuumadda Gaas